လူကြီးတွေ မြန်မြန် သေပေးကြပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » လူကြီးတွေ မြန်မြန် သေပေးကြပါ
လူကြီးတွေ မြန်မြန် သေပေးကြပါ
Posted by ムラカミ on Jan 22, 2013 in Business & Economics, Health & Fitness, Politics, Issues | 32 comments
Japan medical care system
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး (ဒုဝန်ကြီးချုပ်လည်း ဖြစ်သူ) တာရိုအာဆိုကတော့
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ သက်တမ်းရှည်ကြာကြာ အသက်ရှင်ဖို့ ကျန်းမာရေး
အထောက်အပံ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ အစိုးရကို ကုန်ကျစေမယ့်အစား စောစောနဲ့ မြန်မြန်
သေလိုက်သင့်တယ် လို့ တနင်္လာနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ်၂ကြိမ်တိုင်တိုင် ရွေးကောကတင်မြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ ..
ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှ သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံးနဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အပေါများဆုံး တိုင်းပြည်ရဲ့
ဒုတိယခေါင်းဆောင်က နိုင်ငံတော်အဆင့် လူမှု လုံခြုံရေး ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး
ကောင်စီမှာ သည်လို ဆိုခဲ့ပါတယ်။
သင်ဟာ သေချင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆက်လက် အသက်ရှင်အောင် အတင်းအကျပ် အားထုတ်ခံရမှုမျိုးကို
ကောင်းကင်ဘုံက တားမြစ် ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကုန်ကျစားရိတ်တွေကို အစိုးရက ကုန်ကျခံနေရတယ်
ဆိုတာကို သိခဲ့ရင် သင် ညဘက် ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး
သည်လူတွေကို စောစော စီးစီး သေခွင့်ပြုတာကလွဲလို့ ဒါဟာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်
လို့ .. သူက ဆိုပါတယ်။
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျနော်ဟာ
လို့ ဆိုခဲ့တဲ့သူဟာ သေတမ်းစာမှာ သဘာဝကို တုပပြီး အသက်ဆက်စေမယ့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမျိုး
အလိုမရှိလို့ ရေးထားခဲ့သူ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစကားတွေဟာ အစည်းအဝေးတွင်း မှာ သူက ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိမိဘာသာ ရှင်သန်အသက်ရှင်စွမ်း
မရှိကြတော့တဲ့ ဖန်ပေါင်းချောင်လူသားတွေကို ရည်ညွှန်း ပြောဆိုလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၇၂နှစ်ရှိတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တလ အတွင်းကမှ
လက်ရှိ ရာထူးကို ပြန်လည်ရယူခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့သည့်လို တနင်္လာနေ့က စကားမှား အပြီးမှာတော့ သူဟာ
ဒီစကားတွေဟာ သူ့ကိုယ်သူ သာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ အိုမင်းမစွမ်းဘ၀မှာ မြန်မြန် ဇီဝိန်ချုပ်ချင်တယ်
(ချုပ်သင့်တယ်) ဆိုတာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒသာ ဖြစ်ကြောင်း သူ့စကားကို ပြန်လည်ဖာထေး ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ ယုံကြည်ရာကို ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀နိဂုံး ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု စနစ်တွေကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ သင်ဟာ သင့်ဘ၀ရဲ့
နောက်ဆုံးနေ့တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား လို့
သူက သတင်းထောက်တွေကို ဆိုပါတယ်။
အာဆို ဟာ ဆွေကြီးမျိုးကြီး စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်မိသားစု က ပေါက်ဖွားဆင်းသက်သူဖြစ်သော်လည်း
ပါးစပ် အထိမ်းသိမ်းနိုင်မှု စကားကြမ်းကြမ်းတွေ ပြောတတ်မှုနဲ့ ကျော်ကြားပါတယ်။
သူဟာ ကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်ပြည်ရဲ့ သြဇာအရှိခဲ့ဆုံး
၀န်ကြီးချုပ်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယိုရှီဒါ ရှီရဲရု ရဲ့ မြေးဖြစ်ပြီး အခြား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း
တစ်ယောက်ရဲ့ သမီးကို လက်ထပ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
လူဦးရေ ၁၂၈-သန်း ရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၄ပုံ ၁ပုံလောက်ဟာ အသက် ၆၀ အထက်
ဖြစ်ပြီး နောင်နှစ်၅၀ အတွင်း ၄၀% လောက်ထိ မြင့်တက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ နည်းပါးလျော့ကျလာတဲ့ လုပ်သား အင်အားစုဟာ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ကို မီခိုနေရသူတွေ
အတွက် လုံလောက်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု မရှိခြင်းအားဖြင့် ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်လျက်ရှိနေပါတယ်။
P.S ပွားချင်တာ ပွားကြပေတော့ အရပ်ကတို့…။
အောက်ကတော့ အဲ့သည့် အာဆိုဂျီး မြန်မာပြည် လာသွားတာ မကြာသေးဝူးဆိုတဲ့သတင်းပါ..။
(ဟိ… ဘပြောင်ကို ဘာတွေ ကြပ်ပေးခဲ့သလဲ မဆိုနိုင်ဝူး..)
Point man: Taro Aso inspectsaport near Yangon on Jan. 4. KYODO
ဇာတိ – ဖုကုအိုကာ
ဘာသာ – ရိုမန်ကတ်သလစ်
အီလိုက် တွေ တက်သော Gakushuin University မှ Politics and Economics မေဂျာဖြင့် ဘွဲ့ရ
Stanford University တွင်ပညာဆက်သင်ခဲ့သေးသော်လည်း အမေရိကန် သိပ်ဆန်သွားမည်စိုးသဖြင့် ပြန်ခေါ်ခံရ
မိသားစု စီးပွားရေး- အာဆိုကွန်ကရစ် လုပ်ငန်းစု
အမေရိကန် မိုင်းကန်ပနီတွင် ၂နှစ်ဝင်လုပ်ဖူး
မိသားစု စီးပွားရေး နှင့် ဘရာဇီးတွင် အနေကြာ – ပေါ်တူဂီစာ ကျွမ်းကျင်လာ
24 September 2008 – 16 September 2009 ကာလအတွင်း ၀န်ကြီးချုပ် လုပ်ဖူး
လက်ရှိ ဒုဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူထား
သူနှင့် ရှင်ဇို အာဘေး အတွဲမှာ အရှေ့အာရှ တိုင်းပြည်များအကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုသော
အခင်းအကျင်း ကိုင်ဆွဲသူ ကွန်ဇာဗေးတစ်များအဖြစ် ကျော်ကြား (အထူးသဖြင့် ပေါက်ဖော်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားသို့)
ထို၂ယောက်အတွင်းကမှ သူက ပိုမို ခေါင်းမာသူ hard-liner ဖြစ်နေ။
ချမ်းသာတဲ့ဂျူးတွေ လာနေချင်လောက်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်မယ်တို့….
လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားဟာ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး တို့..
စတဲ့ သမိုင်းဝင်တဲ့ အာချောင်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ဖူး
မိန့်ခွန်းများတွုင် စာလုံးပေါင်းမှားဖတ်ခဲ့ဖူးခြင်းများ ရှိခဲ့ပြီး
တိုက်တိုက်လေးရယ်မှဆိုင်ဆိုင် (အိုတခု) ဂျပန် ရုပ်ပြကာတွန်း ပရိတ်သတ်ဖြစ်ကြောင်း
၀န်ခံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လို့ စာကြီးပေကြီး ဖတ်ပါဦး ဂျုပ်ကြီးရယ် လို့ သမခံထိဖူး
အစားကောင်းမက်ခြင်း မှာလည်း ထင်ရှားတဲ့ ၀ါသနာဖြစ်ပြီး တလအတွင်း
၃၁ကြိမ်လောက် သီးသန့် ဇိမ်ခံ စားသောက်ဆိုင်များသို့သွားကြောင်း ဖော်ထုတ်ခံဖူး..
(အော်ရယ်… ဂျပန်ဒေ …အစားမက်သူကိုမှ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဂျီးခန့်သတဲ့ .)
ပစ္စည်း ဥစ္စာ ကြွယ်ဝလာရင် သေရမှာ ကြောက်ကြသတဲ့…….
Final Destination ထဲကလိုပေါ့…..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေရမှာမှန်းသိရင် ဘာဖြစ်လို့များ ပြေးနေကြသလဲကွယ်….
Final Destination2ထဲက သေမင်းကို ပြေးရင်ဆိုင်တဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ကလွဲလို့ကားတိုင်းမှာ နောက်ဆုံး အကုန်သေသွားကြတာချည်းပဲ……
လူငယ်တယောက်အတွက် သေမင်းကို အံ့တုရင်ဆိုင်တာဟာ နည်းလမ်းကျပေမယ့်…..
လူကြီးတယောက်အတွက် သေမင်းကို ရင်ဆိုင်တာကတော့ သိပ်ပီး သဘာဝ မကျလှပါဖူး…..
မိဘကို မရိုသေလို့မဟုတ်ပါဖူး……
ငါ့ကို ခွဲရမှ စိတ်ရမှ ပိုက်ဆံ အများကြီး ကုန်ရမှ အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင် မကုနဲ့ တဲ့…
အဖေမှာ အဲ့လို စိတ်ရှိသလို ကျွန်တော်မှာလည်း အဲ့လို စိတ်ရှိတယ်….
ကိုယ်သာ မသန်မစွမ်းဖြစ်ခဲ့သော်လည်းကောင်း မိသားစုအပေါ် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်မယ်ဆိုသော်လည်း ရောဂါများရှိခဲ့ရင် အရွယ်များရောက်ခဲ့ရင် ကိုယ်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ပါဖူး….. (အခုအချိန် အထိတော့ အဲ့စိတ်ရှိပါသေးတယ် လူကြီးဖြစ်လာရင်တော့ မပြောတက်ဖူး)
တခါတလေ အမှန်တရားဆိုတာ လက်ခံဖို့တယ်ခက်တာကိုး………….
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ……………
တိုင်း ပြည် တစ်ပြည်မှာ လုပ်နိုင်၊ ကိုင် နိုင် စွမ်း တဲ့ သူတွေ နည်း ပြီး မှီခိုတဲ့ သူတွေ များ နေ တာလည်း တိုင်ပြည် အတွက် ၀န်လေးစေတာ အမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘာသူ ရှည်နေတဲ့ အသက် ကိုတော့ သေပါစေရဲ့ လို့ ဘာသွား လုပ်လို့ ရမတုန်း။
ကိုယ့် ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက အမြင် ပြောရရင် ကိုယ်တိုင်လည်း အိုမင်း မစွမ်း ဘ၀နဲ့ အသက် အရှည်ကြီး မနေချင်ဘူး။
ဂျာပွန်နဲ့ တရုတ် ထင်တာပဲ ဘယ်သူသေသေ ကိုယ်ရှည်ရင်ပြီးရော… (အသက်)…
အိုဘားမား အစိုးရ health reform လုပ်ရတာ insurance စနစ် တွေက
ပြည်သူတွေကို ဆီစွပ်လွန်းလို့တဲ့ …
အဲ .. အာဘေး အစိုးရ social security system reform လုပ်မှာက
ကျန်းမာရေးစနစ်တွေက အစိုးရကို စားရိတ်ထောင်းစေလွန်းလို့တဲ့ …
အဲ … သခင်မျိုးဟေ့ ဒိုဘားမန် တိုင်းပြည်ကြီးက စရိတ်မျှပေးစနစ်ကြီးကရော
ဘုန်းကြီးကျောင်းက စွန့်တာလေးစားပြီး… အာဝူးးးးးးးး
သေနေ့မစေ့သေးလို့ မသေသေးတာကို အဲလိုတော့မပြောကြပါနဲ့
ဘယ်သူမဆို ရောဂါဖြစ်လာရင် ဆေးကုကြမှာပါပဲ
သမ္မတကြီး ကို ဘာ ပြောသွားလဲ စုံစမ်းပေးပါ..
အနာဂါတ်အတွက် ပြည်တွင်းလုပ်သားအင်အားစုမျိုးဆက်သစ် လိုအပ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေလို့
အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ကလေး မယူသူ သူများကို အခွန်၂ထပ် စည်းကျပ်လိုက်ပါ တဲ့ …
၁နှစ်တဲ့လား.. နှစ်ကုန်မှ စုတော့မယ်အေ.. လိုအပ်သေးတယ်။
ဒါနဲ့ စဂါးမစပ်.. ပုံထဲက မုတ်ဆိတ်တွေ ကြားထဲ ပုရွတ်ဆိတ်တွေ လွတ်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်လို နေမလဲဟင်.. အယားတော့ ပြေမလားပဲ ခိခိ
သူတို့နိုင်ငံက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ကုန်ကျမှု့ကို အစိုးရက ထောက်ပံနေရလို့ ပြောတာလေ။
ဒီနိုင်ငံမှာက အစိုးရက ဘာများထောက်ပံနေလို့လဲ အဲဒီတော့ ဒီက အစိုးရလည်း အသက်ရှည် မရှည် သူနဲ့မဆိုင် တော့ ဘာမှပြောမှာဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်မိသားစု အသိုင်းဝိုင်းကသာ အဖိုးအဖွားတွေ အသက်ရှည်ရှည်နေစေချင်လား မနေချင်လည်း စဉ်းစားကြပေတော့လေ။ အဲလိုဘဲရှိမယ်ထင်တာပါ။
ဒီလို အန်ကယ်ခ ရေ…
အဲ့သည်လူကြီး အမှန်တွေချည်း ပြောသွားတာဗျ..
မှန်လို့ နားဝင်ခက်နေတာ …
ကျန်းမာရေးအာမခံ ကို ကောင်းအောင် လုပ်ထားတာ အလုပ်လွန်တော့
စည်းကမ်းကြီးတဲ့ လူမျိုးပဲ ဖြစ်ပစေဦး .. လူဟာ လူပဲမို့ အကျင့်ပျက်လာတယ် ခည..
ဆေးပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာရယ် ကျန်းမာရေး အာမခံကောင်းလွန်းတာရယ်ကြောင့်
လုပ်ချင်သလိုလုပ် နေချင်သလိုနေ ရောဂါဖြစ်ရင် အချိန်တန် အာမခံနဲ့ အစိုးရ ကုပေးလိမ့်မယ်
ဆိုတာမျိုးတွေ ချိုးလာကြတယ်… ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခေါင်းကိုက်လို့ အလုပ်ကနေ နေ့တ၀က်
ပြန်ချင်ရင်တောင် လူနာတင်ကားလှမ်းခေါ်ပြီး ဇိမ်နဲ့ ပြန်ကြတဲ့အထိ ဓါတ်ပျက်လာကြတယ်ဗျ..
အဲ့လို ကပ်ပါး တွေအပြင်
တဖက်ကလည်း ဦးနှောက်မသေသေးပါဘူး ဆိုပြီး လုံးဝ ကိုမာ ရနေပြီး ပြန်မကောင်းလာနိုင်တော့တဲ့လူ
ကျိန်းသေပေါက်ကို သေမယ့် ကင်ဆာ ကို ဆေးပညာ နဲ့ စက် အလွန်အကျွံသုံးပြီး ဆွဲဆန့်ထားတဲ့လူ
ဒါတွေကို သူညွှန်းတာ ဗျ..
သူတို့အခြေခံ တည်ဆောက်မှု လောဂျစ်က အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ လူတွေဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို
ထိခိုက်စေဖို့ အတွက်တော့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုယ် အပျက်စီးခံပြီး တမင် မလုပ်ပါဘူး ဆိုတဲ့
ယုံကြည်ချက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အာမခံ စားသုံးသူ(လူထု) ။ အာမခံကန်ပနီ ။ ဖိုင်နန်ရှယ် အင်စတီကျူးရှင်း
။ အစိုးရ ဆိုပြီး အလွှာ၎လွှာ ရှိပါရဲ့ …။ လူထု အကျင့်ပျက်တဲ့အခါ အာမခံကန်ပနီ တွေ ပြိုလဲရင်
ဖိုင်နန်ရှယ် အင်စတီကျူးရှင်းတွေ ပြိုလဲမယ်။ သူတို့ပြိုလဲတဲ့အခါ တိုင်းပြည် စီးပွားပျက်မယ် ..အဲ့လိုမဖြစ်အောင်
အစိုးရ အဆက်ဆက် ခေါင်းထိုး ၀င်လျှော်နေရတာပါဗျာ ..။
ဆိုပါစို့ ကျနော်တို့ဆီမှာ သိန်း၁၀၀ ကုန်ကျမယ့် ခွဲစိတ်မှု အကြီးစား လုပ်မယ်ဆိုရင် လူနာက သိန်း၁၀၀ရှိမှ
ဆေးကုနိုင်မယ် … သူတို့ဆီမှာတော့ ၃၀% ဖြစ်တဲ့ သိန်း ၃၀ ပဲ လူနာက ထုတ်ဖို့လိုတယ်.. သိန်း၃၀ cash
မရှိဘူးလား ..ရသေးတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု။ အလုပ် စတာတွေကို သက်သေတည်လို့ အတိုးနှုန်း သက်သက်သာသာနဲ့
ချေးမယ့် အင်စတီကျူးရှင်းတွေ အများကြီးရှိသေးရဲ့ ..။
ဆိုတော့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ မကုနိုင်လို့ သေရတာလည်း မကောင်းသလို ။ ပိုက်ဆံ သိပ် မလိုဘဲ ကုနိုင်လို့ နေချင်သလိုနေ
စားချင်သလိုစားသောက်ရင်း တိုင်းပြည်ကို ၀န်ပိစေတာ လည်း မကောင်းဘူးဗျို့ …။
သည်တော့ သူတို့ အခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက သေမယ့်လူနာကို မဟားဒယား စက်တွေ အကူအညီတွေသုံးပြီး
ဆွဲဆန့်နေတာထက် ရောဂါမရှိသူ (Good Health) ကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဘက်မှာ ငွေပိုသုံးချင်လို့ပါပဲ…။
အသက် အပိုင်းအခြား ၊လိင်၊ ဆေးအဆင့် စတာတွေ ခွဲပြီး ကျန်းမာရေးအာမခံကိုလည်း ပြန်လည် စည်းကျပ်နေကြတယ်ဗျ..။
ကျနော်တို့ဆီကတော့ လက်ရှိစနစ်နဲ့ ဆက်လို့ အဆင်မပြေတော့တာမို့ … အာမခံစနစ်ဘက် သွားကို သွားကြရတော့မှာပါ။
အဲ့သည့်အခါမှာ (ဂျပန်လို)တိုင်းပြည်ဝန်ပိမယ့် အစွန်း နဲ့ (ယူအက်စ်လို) ပြည်သူဝန်ပိမယ့်အစွန်း ၂ဖက်လုံးလွတ်အောင်
သွားနိုင်မှ တန်ခါကျမယ် ယူဆမိပါကြောင်း
သေမှာသေချာနေသူတယောက်အတွက်.. ယူအက်စ်မှာလည်း.. အသက်ဆွဲဆန့်ရင်.. ဒေါ်လာသိန်းချီ.. တချို့သန်းချီကုန်ကျပါတယ်..။
သာမန်အားဖြင့်.. မဆက်နိုင်ပါဘူး..ဆိုတော့.. ဘန့်ခရပ်(ဒေ၀ါလီ) လုပ်ရပါတယ်..
ဒေ၀ါလီလုပ်လိုက်ရင်.. အဲဒီလူပေးရမယ့်ငွေ.. အစိုးရကဆပ်ပေါ့..
ဆိုတော့.. အစိုးရဆိုတာက.. ငွေတွေမိုးပေါ်ကကျလာတာမှမဟုတ်တာ..
လူထုရဲ့.. အခွန်ငွေတွေကိုသုံး..ဘက်ဂျက်ဆွဲရတယ်ဆိုတော့.. လူထုငွေတွေပါကုန်တာပေါ့..
အဲဒီငွေတွေဟာ.. အင်ဖရာဆောက်ဖို့.. ကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့.. စသဖြင့်သုံးနိုင်တာတွေပါ..
ယူအက်စ်အစိုးရက.. အဲလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နှစ်စဉ်ဘီလီယန်ရာနဲ့ချီ အပိုကုန်တာပါ….။
ဒေါ်လာ တနှစ် ၁ဘီလီယံကိုသာ မြန်မာပြည်ပို့လိုက်ရင်.. ကလေးမွေးသေနှုန်း.. ရှိပြီးထက်.. ၁၀ဆလောက်ကျသွားမှာသေချာပါတယ်..
အသက်တချောင်းအတွက်.. အသက် အချောင်း ၁၀၀မက.. ရင်းနေရတဲ့သဘောဖြစ်ကြောင်း.. လူသားဆန်စွာတွေးကြတာပါ..
ဒါနဲ့  ဇဂါးမဆတ်
ဒါဟာ.. အခုရာစုနှစ်မှာ.. နိုင်ငံတွေကိုအကြီးအကျယ်(အကြီးအကျယ်) ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ကိစ္စ.. ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း..
မြန်မာပြည်မှာ.. မြန်မာတွေသက်တမ်းတိုလို့ပါ..။( ကမ္ဘာတန်းမှာ မြန်မာဟာ သက်တမ်းတိုထဲပါတယ်)
အဲဒီလူတွေအပေါ်.. ပေးဆပ်နေရတဲ့..(ကုန်ထုတ်စွမ်းအားထုတ်နိုင်)သူတွေ.. သာမန်ထက်များနေတယ်..
ယူအက်စ်မှာ.. သက်ကြီးတွေ.. ကွန်မြူနတီကို.. ဖြည့်စည်းပေးရတဲ့.. ၀န်ဆောင်မှုတွေလုပ်ကြကြောင်း..
တသက်လုံးရှာထားတဲ့..စုငွေတွေကို ဖြုန်းပေး..ခရီးထွက်ပေးရင်း.. ငွေတွေလည်ပါတ်စေကြောင်း..
သက်ကြိးများကလည်း..ပင်စင်စားလို့.. ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ပြီး. စိတ်ဒုက္ခနဲ့နေရကြတာထက်စာရင်..အလုပ်နဲ့မို့.. အသက်ပိုရှည်ပါကြောင်း..
ဒီလိုအချက်အလက်တွေကို.. မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေ.. မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေ..
.. သတိ..သတိကြီးစွာထား.. သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ကြရမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း.. :harr:
သဂျီးကတော့ အနီဂိုဏ်း ကို ဒုတ်နဲ့ထိုးပြန်ဘီ …
ကင်ဆာနဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် ဘယ်လိုမှ မရတော့မယ့်အခြေအနေမှာ
ဝေဒနာ ပြင်းပြစွာ ခံစားနေရလို့ Rest in Peace အောင်လို့ …
နှလုံးအခုန်ရပ်အောင် ဆေးထိုးပေးတာ ပါနာတီပါးတား နဲ့ ငြိတယ်
အနှီလူအို ပြဿနာကို မြန်မာပြည်နဲ့ ယှဉ် စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်
မြန်မာပြည်က လူအိုတွေဆီက လုပ်အား ငွေအားကို ရယူဖို့
သဂျီးပြောသလို လုပ်လို့ မရတာ ပင်စင် ကြောင့်ပါပဲ …
ကန်ပနီတွေ ပင်စင် မပေးနိုင်ကြပါ … အစိုးရ ၀န်ထမ်းပင်စင်က
(ထိပ်တန်းအရာရှိတွေကလွဲရင်) ကျန်သူတွေ စားလောက်အောင်တောင် မရကြပါ…
ဆိုတော့ ..ပင်စင် မရှိဘူး မရဘူးလို့ ပဲ assume လုပ်ကြပါစို့ …
၀င်ငွေ ဇီးရိုး ဘ၀မှာ ကျန်းမာရေးအစောင့်အရှောက် စားရိတ်က
အကုန်ကျဆုံး အသက်အပိုင်းအခြား ဖြစ်ပါတယ်…
သည်တော့ ပင်စင်မရ (မရှိ)မှတော့ အသက် ၆၀ (၀ါ) လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တုန်းမှာ
စုနိုင်ဆောင်းနိုင်မှုဟာ .. ဘ၀ နေ၀င်ချိန်အတွက် ပြင်ဆင်မှုပါပဲ
အဲ့သလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ သားသမီး အထောက်အပံ့မျှော်ရုံပါပဲ..
သည်အချက်က အနောက်တိုင်းက လက်ခံကျင့်သုံးနေတဲ့ Theory Y ကိုရော
ဂျပန်တို့ရဲ့ Theory Z ကိုပါ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။
အဲ့သည့်မှာ အလုပ်လုပ်နေစဉ် (ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ရဲ့)
ဟုတ်ကဲ့ ဟိုပင် ဒီပင်ကူးတာပါ။ သာရင်ကူးတာပါ…။ နည်းနည်း ပိုပေးရင်ကို ကူးတာပါ။
(ငွေကြေး၊ အခွင့်အလမ်း နဲ့ recognition) ဘာတခုခု သာတယ်ဆိုရင်ပဲ ..ကူးပါတယ်။
ပင်စင်မရှိခြင်းက မြန်မာတွေကို အလုပ်မမြဲစေခြင်းရဲ့ factor တခုဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဒီလောက်ထိ
နက်နက် တူးပြီး မတွေးကြည့်ရင် မမြင်ရတဲ့ ကိစ္စ တခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံခြားသားတွေ မေးရိုးကြမ်းပြင်ရိုက်ယူရလောက်အောင် အံ့သြကြတဲ့ …
ဟယ်…မင်းတို့ မြန်မာတွေ လက်ရှိအလုပ်ထက် တခြားအလုပ်က ဒီလောက်လေး(အနည်းငယ်)
သာတာတောင် ကူးသလား .. (ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်) ပိုက်ဆံ သိပ်မက်သလား ..
မေးခံထိတိုင်း ကျနော် ဒေါသဖြစ်မိပါတယ်။ ရန်ထဖြစ်ရင်လည်း မထူးတာမို့ ဂလိုနဲ့ပဲ
အထက်က ပင်စင်မရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်ကြီးကို ရေလည်အောင် ရှင်းပြတတ်တဲ့အကျင့် စွဲသွားပါတော့တယ်…
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့်တော့ ဟိုလူတွေကိုများပြောဒါလားလို့ ၀င်ကြည့်တာ … ဟုတ်ဝူးပဲ …
အဲ့ဂလိုလူမျိုးပေါ့ တသက်လုံးခိုင်းစားလာတဲ့နွားကို မထွန်နိုင်၊ မတိုက်နိုင်တော့တဲ့ နအို ကြီးဖြစ်မှာ အသား
တောင်လှီးစားမယ့်လူမျိုး….. ဂယ်ဆိုရင် သူအရင်သေပြသင့်ဒယ်
အစားအသောက်ကတော့သိပ်မသောင်းကြမ်းရှာပါဘူး … တစ်လမှာ ၃၁ ကြိမ်လောက် သွားတယ်ဆိုတော့
ဒီလ အတွင်းကို လူကြီးတွေ သေခိုင်းတဲ့ ပို့စ်
နှစ်ခုမြောက် ဖတ်ရတာ ထင်ပါရဲ့
တော်ပါသေးရဲ့ ဂီ ရယ်…
လူကြီးတွေ မြန်မြန်သေပေး ကြ ဆိုတော့ ဟိုနေ့က ဂေဇက်ပွဲမှာ တို့ ဘာများ အမှားလုပ်မိပါလိမ့်မလဲပေါ့..
ရွာထဲမှာ ကိုယ်က အသက်ကြီးတဲ့ စရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးကလား..
ဟမလေး…. လူကြီးဖြစ်ရမှာတောင် ကြောက်လာပြီ။
ငယ်စဉ် အခါကတော့ သေရမှာ မကြောက်ခဲ့ပါ
သားသမီးရလာတဲ့ အခါ သေရမှာ ကြောက် လာတယ်
ဒီလိုဘဲ အသက်တွေ တဖြေးဖြေး ကြီးလာတဲ့ အသက်ကြီးသူတွေ
အိပ်ရာပေါ်မှာ သူများလုပ်ပေးမှ အပေါ့အလေး စွန့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ
ဘယ်သူမှတော့ အသက်ဆက် ရှင်ခြင်မည် မဟုတ်ပါ
သားသမီး တစ်ဦး အနေနှင့်တော့ မိဘရှိနေသေးတယ် ဆိုတဲ့ အသိက
ဒီကိတ်ဆ လိုက်ပွားရရင် အဆိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ နိူင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲမှာ ဆီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေထဲမှာ အစရှိသဖြင့်ထဲမှာ အယူအဆဟောင်းနဲ့ မကောင်းစိတ်ဝင်နေသူများကြောင့် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ နှေုာင့်နှေးနေသမို့ မလုပ်နိူင်သူတွေသေကြလို့ ပြောရမလား လုပ်နေတဲ့သူတွေ သေကြလို့ပြေရမလား သေဟဲ့ နန္ဒိယ……. ကိန် ကိန်
ဒီမှာလဲ အဲဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေရှိပါ့။
ကိုမာဝင်ပြီး သတိမေ့နေတာ ၁၀နှစ်ကျော်နေတာမို့ ဆရာဝန်တွေက ပေးထားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဖြုတ်ပြီး နိဂုံးချုပ်စေဖို့ ပြောတာကို မိသားစုက ငြင်းတာမို့ တရားရုံးတက်ရတာရှိပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ ပြန်ရှင်လာနိုး မျှော်လင့်ချက်ကို အပြစ်မတင်လိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာထားပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်လဲ မပြုစုနိုင်ဘဲ နဲ့ သူများတွေ မှာ တာဝန်ကြီး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကိုမတွေးကြဘူး ထင်ရဲ့။
တစ်ချို့လူတွေဟာ ဘဝ မှာ Quantity Life က အရေးကြီးလား၊ Quality Life က အရေးကြီးလား ဆိုတာ ကို ထည့်စဉ်းစားဖို့ ဉာဏ်မမှီကြဘူး လို့ သာပြောချင်တယ်။
ချဲ့ပြောရင် မူရင်းနဲ့ လွဲမှာမို့ ရပ်ပါပြီ။
တကယ်တော့ သေအံ့မူးမူး ဖြစ်နေတာ ကို ဆွဲဆန့်နေမဲ့အစား (ဆရာမဂျူးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ယူသုံးရရင်)
နံရံရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို သွားလိုက်တာကမှ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းဦးမယ်။
ဘဝ အသစ်တစ်ခု ပြန်ရမယ်ဆိုတာ သေချာခဲ့ရင်ပေါ့။
အသက်ကြီး ပြီး ဘာမှတာဝန် မရှိတော့ တဲ့လူတွေ မသေရဲကြတာ ကိုယ်ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာ မသိရဲ လို့ Quality Life မရှိတော့တဲ့ ဘဝ ကို မက်နေကြတာနေမှာ။
တစ်ချို့ တရားနဲ့ မွေ့နေသူတွေ ကတော့ ခန္တာရဲ့ဒုက္ခကို တွေးပြီး အမြဲ သေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပါ။
အဲလို ဒုက္ခကိုကြောက်လို့ နောက်ထပ် ခန္တာမရတော့ မဲ့ နိဗ္ဗာန်လို့ အမည်သညာ တတ်ထားတာကို ရဖို့ အားထုတ်နေကြတာ မဟုတ်လား။
” ကိုယ့်ဟာကိုယ်ခေါင်းကိုက်လို့ အလုပ်ကနေ နေ့တ၀က် ပြန်ချင်ရင်တောင်
လူနာတင်ကားလှမ်းခေါ်ပြီး ဇိမ်နဲ့ ပြန်ကြတဲ့အထိ ဓါတ်ပျက်လာကြတယ်ဗျ ”
အစိုးရက ကောင်း ၊ စံနစ်က ကောင်း ပြန်တော့လည်း ၊
လူဆိုးတွေက System ကို Abuse အလွဲသုံးစား လုပ်ကြတယ်လေ ။
သြဇီမှာလည်း ၊ ဆရာဝန်ကြည့်ခ အလကား ၊
အရေးပေါ် သူနာပြုကား အလကား ဆိုတော့ ၊
တချို့ က ခေါင်းကိုက် / ဗိုက်နာတယ် ပြောပြီး သူနာပြုကား ခေါ်တယ် ၊
( ခေါင်းကိုက် / ဗိုက်နာတယ် ဆိုတာက ဟုတ်မဟုတ် စစ်ရခက်တာကိုး )
Super Market နားက ဆေးခန်းကို တမင်သွားပြီး ၊ ဈေးပါဝယ်တယ် ။
ဈေးကအပြန် သူနာပြုကား ထပ် ခေါ်ပြီးပြန်တယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ / ၅ လ တုန်းက သတင်းမှာပါ ပါလာတယ် ။
အဖွားကြီး တစ်ယောက် တစ်နှစ်အတွင်းမှာ သူနာပြုကား အခါ ၁၀၀ ကျော် သုံးလို့တဲ့ ။
အစိုးရက တွက်ပြတာ အဲဒီ အဖွားကြီး အတွက် သူနာပြုကား စရိတ်တင် ၊
တစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဒေါ်လာ တစ်သန်းလောက်ကုန်တယ်တဲ့ ။
( သူနာပြုကား တိုင်းမှာ Para-Medic ၂ ယောက် နှင့်
အသက်ကယ် ကိရိယာ အစုံနှင့် အသင့်စောင့်နေရတာလေ )
အခုတော့ အဲဒီ အဖွားကြီးကို သူနာပြုကား ခေါ်ခွင့် ပိတ်လိုက်ပြီ ။
” သိန်း၁၀၀ ကုန်ကျမယ့် ခွဲစိတ်မှု အကြီးစား လုပ်မယ်ဆိုရင်
သူတို့ဆီမှာတော့ ၃၀% ဖြစ်တဲ့ သိန်း ၃၀ ပဲ လူနာက ထုတ်ဖို့လိုတယ် ”
အဘ တို့ဆီမှာက အစိုးရဆေးရုံမှာ ခွဲစိတ်မှုလုပ်ရင် ၊
တစ်ပြားမှ မပေးရတဲ့အပြင် ထမင်းပါ ကျွေးထားသေးတယ် ။
အဲဒီတော့ ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ ။
မိမိဘာသာ ရှင်သန်အသက်ရှင်စွမ်းမရှိကြတော့တဲ့ စက်အကူနဲ့သာ
နံရံရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို သွားလိုက်တာကမှ ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းဦးမယ်.. :hee:
ဘလောက် အလေနတော ဖြစ်ဖြစ်
မိန်းမမရမချင်းတော့ မသေနိုင်ပါဘူး ဂျာပွန်ရီးရာ……
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် သိပ်ကောင်း အလေးပေးလွန်းတော့ လူတွေက ဆေးရုံဆေးခန်း ဆေးဝါးဓာဓုတွေကို အားကိုးလွန်လာတယ်။ တကိုယ်ရည် ကျန်မာရေး လေ့ကျင့်ခန်း၊ အနေအထိုင် အစားအသောက် ဆင်ခြင်မှု အားနည်းလာတယ် ရလဒ်အနေနဲ့ အစိုးရမှာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာဘီလျံ ရာနဲ့ချီပြီး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်တယ်။ တဖက်က ကြည့်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာ အလုပ်အကိုင် ပေါတာပေါ့နော်၊ ဒီနည်း တဖက်လှည့်နဲ့ ဆေးဝါး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းကုမ္မဏီတွေကို ထောက့်ပံ့ပေးထားတယ် မြင်လို့ရနိုင်မယ်ထင်တယ်။ လူတွေ အသက်ရှည်လာတာ ဝမ်းသာစရာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဆေးနဲ့အသက်ဆွဲဆန့်နေပုံကတော့ သိပ်မဟန်ဘူး။ ဖြစ်သင့်တာ သက်ရှည်ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အပူပင်ကင်းတဲ့ ဘိုးဘွားသက်ရှည် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရမှာ၊ အခုတော့ လမ်းလွဲနေတယ်။ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ကုန်ကုန် ဘတ်ဂျတ် ဘယ်လောက် ပိပိ၊ တဦးခြင်း အနေနဲ့ကြတော့ သိပ်မသိသာလို့ လူတိုင်းက ရတဲ့အခွင့်အရေး ယူကြတာပဲ။ ဒီတော့ ထိန်းသိမ်းရ ခက်သဗျ။။ အပြစ်ဆိုရရင်တော့ စနစ် စနစ် စနစ်ပါပဲဗျာ…။ သဂျီး ဗျားအလှည့်ကြရင် ဆေးဝါးလွတ်အောင် နေပြပါ။ အခုလည်း ဗီရာဂယာမသုံးနဲ့…။ စိန်ရဲလား… :harr:
အခု ဒီစာစုကိုပြန်ဖတ်မိတယ်. ကျနော် ရေးချင်ပြောပြချင်တဲ့ မက်စိကမှားခဲ့သလားရယ်ပေါ့
မိမကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်တာပါ. နည်းနည်းအာမခံစနစ်အပေါ်ကို ထင်တာမြင်တာ နားလည်တာတွေ ချော်နေတယ် ခံစားရရဲ့ဗျာ.
ကျနော်လည်း အဲ့သည့်ဘက်ကပရိုမဟုတ်တော့ အဲ့ဒါမှန်မမှန်မရှင်းပြတတ်ဘူး.
ကျနော်သိတာက အနှီစစ်စတမ်တွေလည်ပတ်ဖို့ အိုင်တီနဲ့ လွယ်ကူမြန်ဆန်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းခည.
သူတို့အလုပ်သဘောကိုတော့ သူတို့ကတ်စတမ်မာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပိုင်းမသိပေမယ့် သူတို့ ဌာနချင်းသွားတဲ့
ပုံကိုတော့ကျက်မိသမို့. မှားတယ်ယွင်းတယ်သိပ်မထင်သလို. ပွိုင့်နဲ့ထောက်ပြတာမျိုးလည်း ဖတ်ဖူးချင်မိပါကြောင်း ခင်ညားးး